Maxaa u dambeeyaa hablaha Shabaab ku taxaabo xabsiyada
Dhibaatada ururka dilaaga ah ee al-Shabaab uu ku hayo dadweynaha Soomaaliyeed kuma koobna keliya ragga balse dumarkana wuu dhibaateeyaa qaar ka mid ahna xabsiyadooda sirta ah ayeyba ku jiraan.
Inta badan dumarkaas waa kuwa ay siyaabo kala duwan isu khilaafeen amniyaadka al-Shabaab oo ay xubno ka yihiin tuugo dantood fiiris ah oo dan u aheyn ilaalinta diinta islaamka oona iska dhowreynin xaq-darrada.
Dumarkaas ay dhibaatada kasoo gaartay ururka dilaaga ah ee al-Shabaab waxay kala noqdeen qaar la dilay, qaar la kufsaday iyo qaar si Khasab ah lagu guursaday.
Hablaha ay dileen waxaa ugu caansaneyd Ayaan Maxamed Caseer oo ay ku dileen magaalada Buula-Burte bishii Abriil sanadkii 2013-kii. Gabadhaan waxay aheyd xaaskii uu ka tagay ninkii isku qarxiyay Hargaha iyo Saamaha kaddib markii ay go’aansatay in dib dambe uusan u guursanin nin xubin ka ah al-Shabaab.
Waxaa la sheegay in gabadhaas ay ka caroodeen ragga amniyaadka kuwaasoo doonayeen inay dumaalaan. Waxay dabeetana kala dageen baabuur u socday Beledweyne, waxaana gabadhaas la waayay muddo labo sanadood ah, muddadaas ka dibna waxay ku toogteen goob fagaaro ah iyadoo ay ku eedeeyeen inay aheyd jaajuus.
Waa sababta ka mid ah sababaha been abuurka ah ee ay ku sheegaan qof Allaale qofkii ka horjeesto ficilladooda iyo amarradooda gurracan.
Sidoo kale, hablahaas waxaa ka mid ah gabar ganacsato aheyd oo la oran jiray Shaaddiyo oo ku sugneyd magaalada Jilib taasoo laheyd ganacsi aad u kala socdo. Dhallinyaradii amniyaadka ayaa la sheegay inay u kala tartami jireen iyadana wey iska celin jirtay. Habeen habeennada ka mid ah ayey amniyaadka la baxeen waxayna ku xireen xabsi sir ah.
Labo sano ayaa la waayay gabadhaas, waxaana dabeetana meydkeedii ay kusoo tuureen meel bannaan ah. Bal qiyas xanuunka qoyskeeda iyo ehelladeeda ay dareemeen gabadhaas.
Qof Allaale qofkii ka biyo diido amarradooda, sabab lagu toogto ayaa loo raadiyaa, maxkamad been ku sheeg oo la wada ogyahay go’aankii kasoo bixi doono ayaa la geeyaa dabeetana waxaa lagu toogtaa goob fagaaro ah.
Al-Shabaab oo siyaabo cusub oo dadka lagu dhaco ku kacday
Hoggaanka sare ee al-Shabaab ayaa lagu soo warramayaa inuu amray xubnaha ururka inay sare u qaadaan lacagaha xaaraanta ah ee ururku ummadda Soomaaliyeed ka dhaco ee uu ugu yeero zakawaadka.
Iyadoo dhaqaalaha guud ee kooxda uu hoos u dhacay taasoo ay sababeen goobaha muhiimka ee ay dhaqaalaha ku haysatay oo laga saaray sida degmada Jannaale, waxaa lagu soo warramayaa in xubnaha ururka lagu khasbay inay dadka si xoog ah uga soo qaadaan lacagaha.
Sidoo kale, khilaafka xooggan ee u dhaxeeya hoggaamiyaha al-Shabaab iyo Mahad Karaatey, kaasoo u xil-saarnaa dhaqaalaha ururka, ayaa la sheegay inuu saameyn weyn ku yeeshay oo ku aaddan dhaq-dhaqaaqa ururka.
Bishii lasoo dhaafay, hoggaamiyaha sare ee al-Shabaab ayaa la sheegay inuu xilka ka qaaday Mahad Karaatey iyo Bashiir Qoorgaab, taasoo dhalisay in beesha Karaatey ay ka xummaadeen xil-joojintiisa.
Waxaa taasi xigtay in kooxda ay u kala go’do labo qeybood, kuwa raacsan Mahad Karatey iyo kuwa raacsan hoggaamiyaha sare.
Waxaa lagu soo warramayaa in taasi sababtay in xubnaha al-Shabaab ay raadinayaan siyaabo cusub oo ay ku soo kabi karaan hoos-u-dhaca dhaqaale ee soo wajahday.
Waxaa la sheegay in boob cad ay ku hayaan goobaha miyiga ah ee ay weli ka arrimiyaan iyo magaalooyinka ay weli awoodda ka leeyihiin.
Waxaa layaab leh in shacabka Soomaaliyeed ee dan yarta ah oo iyaguba ku dhibaateysan nolosha la dul saaro lacago aysan xamili karin siiba bisha Ramadaan ee barakeysan ee u baahan in masaakiinta la taakuleeyo.
Dhaq dhaqaaqyo Ciidan oo ka bilaawday Gobolada Baay iyo Bakool
Xarunta Taliska qeybta 60,aad ee Ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ee Gobolada Baay iyo Bakool ayaa lagu diyaariyay boqolaal ka mid ah ciidamada Xoogga dalka Soomaaliya e ka qeyb qaadanaya la dagaalanka Al-Shabaab.
Saraakiisha ciidamada Xoogga dalka ayaa waxa ay sheegeen in ay haatan diyaariyeen Ciidamada ka qeyb qaadan lahaa dagaalkaas si ay u furan Wadooyinka ay Go’doomiyeen Al-Shabaab.
Taliyaha Qeybta 60,aad ee Ciidamada Xoogga dalka Ibraahim Yaroow ayaa sheegay in iyaga oo fulinaya amarkii Madaxweynaha Soomaliya iyo dhamaan talisyada xoogga dalka Soomaaliya ay bilaabi doonaan dagaalkaas.
Waxa uu sheegay in iyaga iyo Shabaab uu kala dhaxeyo dagaal culus balse ay iyagu dadka Shacabka ah leynayaan taasina aysan ka aqbaleyn. Isaga oo la hadlayay Boqolaal Askari oo loo diyaariyay dagaalkaas ayuu sheegay in Ciidamadu ay si dhaqso ah u howlgalli doonaan Al-Shabaabna loogu tegi doono Goobaha ay ku sugan yihiin.
Howlgalo lagu Baacsanayo Al shabaab oo ka dhacay Shabeelaha hoose
Ciidamada xooga dalka ayaa howlgalo lagu Baacsanayo Maleeshiyaadka Nabad diidka Al shabaab waxay ka sameeyeeyn Tuulooyin hoostaga degmada Kuntuwaareey ee Gobolka Shabeelaha hoose.
Guddoomiye ku xigeenka Gobolka Shabeelaha hoose Cabdi Fitaax Xaaji Cabdulle ayaa sheegay in howlgalkan uu horkacayay Guddoomiyaha Gobolka Shabeelaha Ibraahim Aadan Cali Najax ay fuliyeen ciidamada Ururka 26-aad guutadiisa sedexaad, isagoona sheegay inuu guul ku soo dhamaaday, lana eryay Maleeshiyada Al shabaab ee ku dhuumaaleysanayay Tuulooyinkaasi.
“Guddoomiyaha gobolka Shabeelaha hoose oo horkacayo ururka 26-aad guutadiisa sedexaad ayaa waxay howlgalo ka fuliyeen tuulooyin hoostaga degmada Kuntuwaareey ee Gobolka Shabeelaha hoose, iyadoo ciidamada ay halkaasi ka fuliyeen howlgal lagu baacsanayay Maleeshiyaadka Al shabaab, waxayna ku guuleysteen ciidamada inay guud ahaanba ka saaraan argagaxisada meelaha ay ku dhuumaaleynsayeen”
Sidoo kale wuxuu sheegay Guddoomiye ku xigeenka Gobolka Shabeelaha Hoose in howlgalkan uu hordhac u yahay dagaalka uu ku dhawaaqay Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo dalka looga ciribtirayo Maleeshiyaadka Jid iyo jihadiidka ee Al shabaab.
Miino raggii dhigayay ay kula qaraxday duleedka degmada Balcad
Guddoomiyaha degmada Balcad ee gobolka shabeelaha Hoose Qaasim Cali nuur ayaa sheegay in qarax ka dhacay xalay deegaanka Danida ay ku dhinteen ugu yaraan lix ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen
Wuxuu sheegaya in qaraxaasi uu dhacay abaarihii 11 fiidnimo ee xalay, xilli qaraxaasi la dhigayey meel u dhow buundo ku taalla degaanka Danida oo u dhexeeya Balcad iyo Afgooye. “abaarihmeesha ay wax ka dhaceen waxay u dhaxaysaa Balcad iyo Afgooye, ma aha wax qarxay baabuur ee waa Miino ayay iyagu dhigayeen. dadka degaankuna waxay noo sheegeen 8 dhimasho ah iyo 4 dhaawac ah, Miinow ay dhigayeen ayaa ku qaraxday Abaarihii 11 habeenimo.
Guddoomiyuhu wuxuu kaloo sheegay in ururka al-shabaab ay dab qabadsiiyeen tuulada baarlow oo u dhaxaysa balcad iyo Afgooye, hase yeeshee ma sheegin khasaaraha ka dhashay, mana jirto ilo madax banaan oo xaqiijinaya arrintaasi. Goobta uu qaraxu ka dhacay ee ay ku dhinteen lixda Al-shabaabka ah ayaa u dhow goob toddobaadkii hore uu ka dhacay qarax kale oo lala beegsaday babuur siday khudaar oo ay ku dhinteen lix qof oo ka ganacsada wax soo saarka beeraha.
Shir amniga ku saabsan oo Muqdisho ka dhacay
Kulan looga hadlayay sugida amniga guud ahaan dalka Soomaaliya ayna ka qeybgaleen mas’uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka iyo diblomasiyiin caalami ah ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho.
Shirka wada wada jir u guddoomiyay Wasiirka Amniga Gudaha Soomaaliya Maxamed Abuukar Isloow Ducaale iyo Danjiraha Midowga Yurub u fadhiya Soomaaliya, waxaana goob joog ka ahaa taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliyeed Jeneraal C/xakiin Daahir Siciid Saacid iyo wafuud ka socotay dowlad gobolleedyada dalka ka jira.
Waxyaabaha ugu muhiimsan oo shirkaasi la iskula soo hadal qaaday waxaa ka mid ahaa dhaqan gelinta qodobada la xiriira dhinac amniga dalka Soomaaliya, kuwaa oo ka soo baxay shirkii bishii May ee sanadkan ka dhacay magaalada London.
Wasiirka Amniga gudaha Maxamed Abukar Isloow Ducaale oo shirka furay ayaa sheegay in uu shirkaan daba socdo shirar hore oo ka dhacay gudaha iyo dibadda dalka,kuwaa oo la xiriiray dhismaha ciidamo Qaran oo isku dhaf ah, islamarkaana ciidamadu ay isku diyaariyaan sidii ammaanka dalka ay uga la wareegi lahaayeen AMISOM.
Dowladda Soomaaliya ayaa horay u sheegtay in ay dhiseyso ciidamo isku dhaf ah oo awood leh si mustaqbalka dowladda Soomaaliya ugala wareegi karto howlgalka midowga Africa AMISOM nabad-galyada guud ahaan dalka Soomaaliya
In ka badan 60 argagixiso oo lagu dilay aagga buuraha Galgala
Shacabka oo sheegay in argagixisadu aysan hakin karin horumarka dalka
Taliyehii hore ee sirdoonka al-Shabaab oo kooxda ugu baaqay in ay is dhiibaan